इन्टरनेट - मानिसजातिको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार। वर्ल्ड वाइड वेब बाटो मान्छे अवसर र अवकाश गतिविधिहरु कमाउन, समय, दूरी, संचार विधिहरू बारेमा विचार सहयोग, परिवर्तन भएको छ। इन्टरनेटमा धन्यवाद आधुनिक मानिस आफ्नो आमाबाबु, बाजेबज्यै र थप टाढा पुर्खाहरूको भन्दा दस गुणा बढी जानकारी प्राप्त गर्दछ। दुर्भाग्यवश, कि नेटवर्क मा हुन्छ छैन सबै, एकदम, मजबूती, सुरक्षित र तार्किक जायज।
इन्टरनेट को सिकार अक्सर बच्चाहरु र किशोरों छन्। केही साइटहरु को सामाग्री ती जसको मन अझै पनि गठन भइरहेको छ केही भन्न, कठोर छ, पनि एक वयस्क। साथै, इन्टरनेट - यो fraudsters भर्चुअल स्पेस मा ठहराव अफलाइन भन्दा धेरै सजिलो छ जहाँ प्राप्त गर्न को लागि एक राम्रो क्षेत्र हो।
नेटवर्क मा साना पुस्ता को सुरक्षा मुद्दाहरू र वयस्क मा 2004 त, सुरक्षित इन्टरनेट दिन स्थापित भएको थियो, संसारमा विशेषज्ञहरु फिक्री।
रूपमा काम गरे पर्व को पहल संग युरोपेली आयोग, र परियोजनाको संयोजक संगठन Insafe (युरोपेली सुरक्षित इन्टरनेट नेटवर्क) थियो। Insafe राष्ट्रिय केन्द्र जसको कर्मचारीहरु विकास र विभिन्न पक्षहरू शैक्षिक कार्यक्रम लागू माथि बनेको छ , इन्टरनेटमा सुरक्षा बच्चाहरु र हटलाइन को युवा संग कुराकानी।
अनुभव साझेदारी र आफ्नो कार्यहरू समन्वय saferinternetday.org साइट मा हुन सक्छ। यस प्लेटफर्ममा, आफ्नो विचार र विकास विशेषज्ञहरु छोडेर बस संसारभरिका मानिसहरूलाई बारेमा हेरचाह। जो कोहीले तिनीहरूले इन्टरनेटमा सावधान छन् कि निर्धारण गर्न विशेष परीक्षण पास गर्न सक्नुहुन्छ।
सामयिक मुद्दाहरू Insafe सम्बोधन:
इन्टरनेटमा फोटो र सिर्जना अवतारहरूमा पोस्ट: एक आत्म-छवि संसारभरि प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन, र के - तपाईं सक्दैन, र किन;
सन्देहपूर्ण ब्यानरहरू र लिंक को लागि संक्रमण: यो असम्भव एक "यात्रा" जहाँ zavedet ठीक भविष्यवाणी गर्न छ;
खराब कार्यहरू: ठगी शिकार बन्ने नगर्न।
को Insafe एक भाग र रूस छ। रूसी लेखक मानिसहरूलाई दैनिक जीवनमा, मा सम्भव धम्की र कार्य को विधिहरू मा इन्टरनेट को प्रभाव बारे बताएको पृष्ठहरूमा पुस्तक "इन्टरनेट सुरक्षा को ABCs," यस्तो लेखे खतरनाक अवस्था।
को सुरक्षित इन्टरनेट दिन रूपमा
संस्थापक र पहल समर्थित भएका सबैलाई, यो महत्त्वपूर्ण नेटवर्क को जिम्मेवार र सुरक्षित प्रयोग बढाउन छलफल। को सुरक्षित इन्टरनेट दिनमा बाहिर विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजनिक ध्यान आकर्षित गर्न।
त्यसैले, एक वर्ष पहिले वाशिंगटन, डीसी, को सम्मेलन "सुरक्षित इन्टरनेट दिन 2014" मा। आयोजकहरु नकारात्मक दर्शक गरेको ध्यान केन्द्रित छैन, तर नेटवर्क प्रयोग रचनात्मक तरिका देखाउन खोजे। जवान मान्छे, विद्यार्थी र राजनीतिज्ञ वेब मा सुरक्षित फेला आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्ने आकर्षित गर्न भाग लिन। यो पनि खातामा लगियो जवान मान्छे को विचार इन्टरनेटमा भविष्य विकास गर्दै हुनुहुन्छ।
अन्य देशहरूमा, सुरक्षित इन्टरनेट दिन - सम्मेलन, फोरम, लेक्चर को प्रयोगकर्ता को अधिकार र दायित्व मा को नै दिन। आईटी-विशेषज्ञहरु, सरकारी, कानून प्रवर्तन को सदस्यहरु संग छलफल सभाहरूमा संगठित stakeholders लागि।
सुरक्षित इन्टरनेट दिन रूस मा
रूसी छुट्टी 2005 देखि मनाइन्छ। आयोजित Runet सुरक्षा हप्ताको एक महत्वपूर्ण मिति अघि हप्ता सुरक्षित इन्टरनेट रूस मा केन्द्र को पहल मा। छुट्टी समयमा एक मानिन्छ वा अन्य समस्या वर्ल्ड वाइड वेब को प्रयोग हो। त्यसैले, 2013 मा छलफलहरू मा त्यहाँ नेटवर्क मा संचार को नैतिक मुद्दाहरू थिए, र एक वर्ष पछि आयोजकहरु इन्टरनेट सुधार गर्ने खोजी गर्न उपस्थित। यो मुद्दा को चर्चा, र 2015 जारी राखे। आयोजकहरु अनुसार, नेटवर्क बच्चाको व्यक्तित्व को सुरिलो विकास प्रचार, सामग्री साइट विकास गर्न सकारात्मक हुनुपर्छ।
सुरक्षित अनलाइन वातावरण बनाउन को समस्या छलफल लागि वार्षिक मंच मा, जानकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, जनसंख्याको डिजिटल साक्षरता बच्चाहरु र किशोरों सहित बृद्धि। जानकारी disseminate निषेध समाविष्ट कि सिर्जना भएको छ साइटहरु एकीकृत रजिस्टर को पहल मा, इन्टरनेट सुरक्षा को लिग द्वारा आयोजित छ। सञ्चालन प्रचार प्रतियोगिताहरूमा "मेरो सुरक्षा इन्टरनेटमा" र "Interneshka" मंच भागको रूपमा।
2009 देखि, सुरक्षा Runet हप्ताको एक सरकारी छुट्टी घटनाहरू छ। सुरक्षित इन्टरनेट दिन फेब्रुअरी पहिलो मङ्गलबार मनाइन्छ।
के रूसी प्रयोगकर्ता bothers
को हटलाइन "बच्चाहरु अनलाइन" (2013) को नतिजा, अक्सर trolling मा विशेषज्ञहरु बारी (आक्रामक को व्यवहार अरूलाई तिर केही प्रयोगकर्ताहरू) र cyberstalking। दोस्रो स्थानमा - fraudsters को गतिविधिहरु। प्रयोगकर्ता अक्सर खराब अवस्थामा पक्रेको भएपछि पनि कल र बाहिर एक तरिका फेला पार्न चाहन्छु।
Kaspersky ल्याब जो फेला थप रूस को आधा भन्दा वेबकैम को प्रयोग संग जोडिएको समस्याहरूको डराउँछन् एक सर्वेक्षण (2014), सञ्चालन। यो ग्याजेट अपराधीहरूलाई सजिलै प्रयोगकर्ता नाम चिन्न सक्छौं को मदत पाएर व्यक्तिगत तस्बिरहरू र वित्तीय स्रोतहरू पहुँच बढाउनका पासवर्ड, व्यापार रहस्य, खाता। गुप्तचर रोक्दैन क्यामेरा लेन्स बन्द। घुसपैठियों होसियार प्रयोगशाला मा विकसित सबै उपकरणहरू लागि Kaspersky इन्टरनेट सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, जनसंख्या, बच्चा अश्लील, पृष्ठ, लागूपदार्थ, हिंसा, जातीय र अन्य भेदभाव, अवैध क्रियाकलाप प्रचार "वयस्कहरूको लागि" सार्वजनिक डोमेन साइटहरु मा चिन्ताकारक उपस्थिति छ।
Runet विकास लागि संभावनाहरु
संचार र मंत्रालय मास संचार इन्टरनेटको निम्न कार्यहरू विकास लागि जिम्मेवारी वहन। यसलाई थप प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षित इन्टरनेट स्रोतहरू पहुँच प्रदान गर्न योजना छ। यो लागि तीव्र फाइबर-ओप्टिक संचार को नयाँ च्यानलहरू अप बनाए। यो पनि एउटा ई-मेल र अनलाइन वाणिज्य विकास गर्न योजना छ। कारण ध्यान नेटवर्क कारोबार, चलचित्र, सामाजिक र अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाहरु मा विज्ञापन गर्न दिइनेछ। विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिन 2016 सारांश र नेटवर्क को नवीन विकास समस्या छलफल सुरु हुनेछ भनेर विश्वास गर्ने कारण छ।
छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षा गर्न
आधुनिक आमाबाबुले विशाल नेटवर्क मा आफ्नो छोराछोरीको सुरक्षा बारे चिन्तित हुनुहुन्छ। अनलाइन मद्दत कार्यक्रम "सुरक्षित इन्टरनेट" को नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखि साना पुस्ता सुरक्षा गर्न। बच्चाहरु र किशोरका वर्ल्ड वाइड वेब को प्रयोग को नियम सिक्न, इन्टरनेट लत को रोकथाम लागि सुरक्षा ज्ञान नेटवर्क प्राप्त गर्नेछ।
बच्चा मात्र आवश्यक र उपयोगी जानकारी पाएको क्रममा, विशेष कम्प्यूटर कार्यक्रम विकास भएको छ। तिनीहरूलाई को एक - छोराछोरीको ब्राउजर "Gogul", द्वारा शिक्षकहरूलाई र बच्चा मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइटहरु को एक सूची छ जो। कार्यक्रम तपाईँले वेब भ्रमणमा ट्रयाक राख्न र इन्टरनेटमा बच्चा को रहन सीमित गर्न अनुमति दिन्छ।
यो इन्टरनेट फिल्टर ध्यान लायक छ "सेन्सर।" तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा यो स्थापना भने, तपाईं बच्चा मात्र "सेतो सूची" बाट पृष्ठहरू स्क्यान गर्नेछ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ।
सुरक्षित इन्टरनेट दिन रूस र अमेरिका मा, तर पनि अन्य धेरै देशहरूमा मात्र होइन एउटा सरकारी छुट्टी, भयो। 2015 मा, यो भन्दा बढी एक सय देशहरूमा चिन्ह लगाइयो।
मुर्खको दिवस, वा मूर्ख दिन
चिकित्सा कार्यकर्ता को दिन मना गर्दा
म को अनुसार, र रिकन्सिलेसन रूस दिन आवश्यक छ?
Oksana Yashankina: जीवनी र फोटो
यूएमएल प्रयोग केसरेखा
पत्र को लाखौं शब्द: प्रोटीन के हुन्
तह, शहर, सडक वा पहाड: ग्रह हब संग साइकल। समीक्षा मालिक
Profuse डराएको - निराश लागि एक कारण
डाक्टर अनौठो (Marvel हास्य): वर्णन, इतिहास, रोचक तथ्य
केक "Millefeuille" नुस्खा। एक मिठाई "Millefeuille" (फोटो) कसरी खाना पकाउनु
Warframe: कसरी खेल संसारको खोल्न
"संसार" मा पासवर्ड कसरी परिवर्तन गर्ने?
एक तकिया मा बच्चा निद्रामा हुँदा सक्छन्? हामी सिक्न!